အမျိုးသားများအတွက်နှင့်အမျိုးသမီးများအတွက်လိပ်ပြာ Tattoos ဒီဇိုင်း IDEA - Tattoos အနုပညာအကြံပြုချက်များ
အမျိုးသားများအတွက်နှင့်အမျိုးသမီးများအတွက်လိပ်ပြာ Tattoos ဒီဇိုင်း Idea
sonitattoo ဇူလိုင်လ 1, 2016
လိပ်ပြာတက်တူး၏ဂုဏ်အသရေ၏အကြိုးကိုလြှော့တှမရနိုင်ပါ။ လိပ်ပြာသဘာဝကိုတန်ဖိုးထားသူကိုလူတိုင်းကချစ်ကြပါတယ်။ အမြိုးသမီးမြားအများအားဖြင့်ကျနော်တို့တက်တူးအဖြစ်သူတို့၏အလောင်းများကိုအပေါ်လိပ်ပြာရှိသည်သောသူကိုတွေ့မြင်နေကြရသည်။ လိပ်ပြာများ၏အသွင်သဏ္ဌာန်နှင့်အရောင်များအနုပညာအလုပ်အဘို့ထိုသူတို့စုံလင်သောစေသည်ဘာတွေလုပ်နေလဲ။ လိပ်ပြာကောင်းစွာကိုယ်စားပြုနိုင်သောကိုယ်ခန္ဓာ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုခဲရှိပါသည်။
လိပ်ပြာဝိညာဉ်ရေးနှင့်ချစ်ခြင်းအကြောင်းကိုဆွေးနွေးတင်ပြထားပါတယ်။ ဒါဟာ psyche နှင့်ပင်မေတ္တာ, အလိုဆန္ဒနှင့်ချစ်ခင်ပုံဖော်နိုင်ပါတယ်။ အဆိုပါ #butterfly အရှိဆုံးမင်းသမီးအမြဲကသူတို့အလောင်းတွေပေါ်လက်မှတ်ရေးထိုးရလိုသည့်အကြောင်းရင်းဖြစ်သောအလွန်လှပရောင်စုံဖြစ်ပါတယ်။ ကလက်မှတ်ရေးထိုးအခါက exhumes အဆိုပါကြော့ရှင်းနှင့်မာနထောင်လွှားအံ့သြဖွယ်ပါပဲ။ ဒါဟာ #tattoo ထားရှိသွားမည်ဖြစ်ကြောင်းဘယ်မှာဆုံးဖြတ်တစ် wearer ၏လုပျငနျးဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါလိပ်ပြာတက်တူးထိုးချစ်စရာကောင်းတဲ့နှင့်အံ့သြဖွယ်ပါပဲ။ အဆိုပါလိပ်ပြာကလှပသောထုတ်ကိုဖွင့်နိုင်မီအချို့အသွင်ပြောင်းခံယူဖို့လူသိများသည်။ ရလဒ်အဖြစ်အဓိပ္ပါယ်များအများကြီးရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းနှင့်တစ်ဖန်ပြန်လည်မွေးဖွားခြင်းတူသောလိပ်ပြာနဲ့ဆက်စပ်နေကြသည်။ ခရစျယာယေရှုခရစ်သေခြင်းမှရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းနှင့်ကောင်းကင်ကိုသည်သူ၏တက်ကြွအဖြစ်လိပ်ပြာယူပါ။
လိပ်ပြာတက်တူးထိုးလည်းမေတ္တာသည်ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းနှင့်တစ်ဖန်ပြန်လည်မွေးဖွားခြင်း, ဝိညာဉ်ရေးနှင့် Soul, ေူပာင်းလဲရေးကို, ဝိညာဉ်ရေးနှင့် Soul, ကျေးဇူးတော်ရှိစေသတည်းနှင့်ဣတ္ဆိုလိုသည်။ သငျသညျကိုရပ်တန့်နှင့်၎င်းတို့၏အဓိပ္ပါယ်များဝယ်လိုအားချင်အောင်သာအနည်းငယ်တက်တူးရှိပါတယ်။ ထိုကဲ့သို့သောတက်တူးတစ်ခုမှာမူကွဲနှင့်စတိုင်များလာသောလိပ်ပြာတက်တူးဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင်ဆဲလ်တစ်လိပ်ပြာ Tattoos ဝိညာဉ်ရေးနှင့်ပုဂံသင်္ကေတဖြစ်တယ်။ အကြောင်းကိုပြောသွားလည်းအသက်ရှင်ကျန်ရစ်ခဲ့ကြသောသူတို့အားမျှော်လင့်ချက်နှင့်တစ်ဖန်ပြန်လည်မွေးဖွားခြင်းကိုကိုယ်စားပြုသောရင်သားကင်ဆာလိပ်ပြာတက်တူးထိုးရှိပါသည်။
1. ခြေကျင်းပန်းပွင့်နှင့်လိပ်ပြာ မိန်းကလေးများအဘို့ချစ်စရာတက်တူးဒီဇိုင်း
အများဆုံးဖှယျပုံပြင်များလိပ်ပြာ၏ပုံဆွဲနှင့်အတူပြောပြသည်နေကြသည်။ ရင်သားကင်ဆာအသက်ရှင်ကျန်ရစ်ကြသူအမျိုးသမီးများထိခိုက်အစိတ်အပိုင်းများအပေါ်အမာရွတ်များကိုဖုံးလွှမ်းရန်လိပ်ပြာသုံးပြီး, ယနေ့မြင်ကြသည်။ ပုံရိပ်အရင်းအမြစ်
2 ။ ပိရမစ်များနှင့်လိပ်ပြာ မိန်းကလေးများအဘို့အပြန်တက်တူးမင်
သင့်ရဲ့လိပ်ပြာ၏အရွယ်အစားသင်သည်သင်၏ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာစွန့်ခွာချင်ဘယ်မှာပေါ်မူတည်ပါလိမ့်မယ်။ သငျသညျပိုကြီးတစ်ခုခုစဉ်းစားနေလျှင်မည်သို့ပင်သည်, ပေါင်, အ tummy သို့မဟုတ်နောက်ကျောအဘို့ပြီးပြည့်စုံသောတည်နေရာနိုင်ပါတယ်။ ပုံရိပ်အရင်းအမြစ်
3 ။ နောက်ကျောအပေါ်မိန်းမတို့အဘို့အစိမ်းရောင်လိပ်ပြာတက်တူးဒီဇိုင်း
အဆိုပါအနုပညာရှင်သင်ဆုံးဖြတ်သေးလျှင်ကိုယ်အဘို့, လက်ျာလိပ်ပြာတက်တူးထိုးရွေးချယ်ရာတွင်၏လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့်အတူရကူညီပေးပါမည်။ ပုံရိပ်အရင်းအမြစ်
4 ။ မင်းသမီးများအတွက်ချစ်စရာလိပ်ပြာတက်တူးဒီဇိုင်းကိုမှင်စိတ်ကူး
အမာရွတ်များ, ရုပ်ဆိုးအတွေ့အကြုံများနှင့်နာကျင်မှုလှပသောသတ္တဝါများအဖြစ်လူသိများကြသည်လိပ်ပြာတွေနဲ့အစားထိုးနိုင်ပါသည်။ သင်သည်သင်၏အမျိုးသမီးအခြမ်းကိုချွတ်ပြသနိုင်ဖို့ကြိုးစားနေသောသူအမျိုးသမီးတစ်ဦးဖြစ်ပါသလား ပုံရိပ်အရင်းအမြစ်
5 ။ မိန်းမတို့အဘို့ရိုးရှင်းတဲ့နောက်ကျောလိပ်ပြာတက်တူးဒီဇိုင်း
သငျသညျလိပ်ပြာချစ်သောသူယောက်ျားတစ်ယောက်ရောက်နေတယ်ဆိုရင်, သငျသညျသဘာဝကလိပ်ပြာနှင့်တကွကြွလာသောအလှတရားဆုံးရှုံးမပါဘဲသူတို့ကိုအနည်းငယ်ပုလ်စေနိုင်သည်။ ပုံရိပ်အရင်းအမြစ်
6 ။ ချစ်စရာလိပ်ပြာတက်တူးဒီဇိုင်းကိုမှင်စိတ်ကူး
လိပ်ပြာတက်တူးထိုးဘို့အသွားပါ။ သငျသညျသဘာဝကိုချစ်ပြီးပုန်းဖို့အမာရွတ်များရှိပါတယ်သောသူဖြစ်မည်အကြောင်း, လိပ်ပြာသင်တို့အဘို့အကောင်းဆုံးရွေးချယ်စရာရှိနိုင်ပါသည်။ ပုံရိပ်အရင်းအမြစ်
7. သံလိုက်အိမ်မြှောင် နောက်ကျောအပေါ်မိန်းကလေးငယ်များနှင့်လိပ်ပြာတက်တူးမင်
သငျသညျအပွင့်သို့မဟုတ်သင်စိတ်ဝင်စားကြောင်းအခြားမည်သည့်အရာဝတ္ထုန်းကျင်ကသူတို့ကိုဖန်တီးလျက်သင့်လိပ်ပြာတက်တူးဖို့ပျော်စရာ add လိမ့်မည်။ ပုံရိပ်အရင်းအမြစ်
8. ဂီတ မှတ်ချက်နှင့်လိပ်ပြာကိုပြန် messagee နှင့်အတူမင်းသမီးများအတွက်တက်တူးစိတ်ကူး; ယုံကြည်
ထိုနေ့၏အဆုံးမှာသင်သင့်ခန္ဓာကိုယ်ထဲကနေစိုက်ကြည့်သည်ဤချစ်စရာကောင်းတဲ့သတ္တဝါများတယ်ပျော်ရွှင်ကြသည်။ သင်ပင်သူတို့အပျေါမှာရေးထိုးချစ်စရာကောင်းတဲ့စကားနှင့်ဆန္ဒရှိသလောက်လိပ်ပြာဆွဲနိုင်ပါတယ်။ ပုံရိပ်အရင်းအမြစ်
9 ။ ဖက်ရှင်အကြောင်းနားလည်တဲ့လူများအတွက်အံ့သြစရာလိပ်ပြာတက်တူးစိတ်ကူး
လိပ်ပြာအတောင်ရောင်စုံနူးညံ့သိမ်မွေ့သောဖြစ်ကြသည်။ ဤရွေ့ကားအတောင်မုန်တိုင်းပြီးနောက်နူးညံ့ကြင်နာမှုနှင့်နူးညံ့သိမ်မွေ့ဖော်ပြကြသည်; သေးစိန်ခေါ်မှုများအနိုင်ရရန်ခွန်အားဖေါ်ပြခြင်း။ ပုံရိပ်အရင်းအမြစ်
10 ။ ပန်းပွင့်နှင့်လိပ်ပြာတက်တူးဒီဇိုင်းကိုမှင်စိတ်ကူး
11 ။ သေးငယ်သော ဝမ်း မင်းသမီးအဘို့လိပ်ပြာတက်တူးစိတ်ကူး
12 ။ နောက်ကျောအပေါ်အပြာရောင်အရောင်လိပ်ပြာတက်တူးမင်စိတ်ကူး
ဒီချစ်စရာကောင်းတဲ့တက်တူးနှင့်အတူသဘာဝတရား၏ဒြပ်စင်များနှင့်ချိတ်ဆက် Get ။ သငျသညျကိုယျခန်ဓာမဆိုစိတျအပိုငျးအပျေါတက်တူးထိုးထားခဲ့နိုင်သည်နှင့်အနုပညာနေဆဲအံ့သြဖွယ်ဖြစ်လိမ့်မည်။ ပုံရိပ်အရင်းအမြစ်
ပိုပြီးလိပ်ပြာ Tattoo ဒီဇိုင်းအဘို့ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ
ဆင်တက်တူးလက်တက်တူးKoi ငါးတက်တူးလိပ်ပြာတက်တူးမိန်းကလေးများအဘို့အတက်တူးကျောက်ဆူးတက်တူးမြှားတက်တူးကောင်းကင်တမန်ကတက်တူးလက်မောင်းတက်တူးအစ်မတက်တူးကငျးမွီးကောတက်တူးခြေလျင်တက်တူးအကောင်းဆုံးမိတ်ဆွေတက်တူးချစ်စရာတက်တူးပန်းချီတက်တူးကြောင်တက်တူးငှက်တက်တူးနောက်ကျောတက်တူးခြေကျင်း Tattoosရွှေလင်းတတက်တူးခြင်္သေ့သည်တက်တူးတက်တူးထိုးစိတ်ကူးများဟင်္တက်တူးတက်တူးထလက်ဝါးကပ်တိုင်တက်တူးစိန်တက်တူးသံလိုက်အိမ်မြှောင်တက်တူးနေရောင်တက်တူးကြာပွင့်ကိုတက်တူးထိုးအသင်္ချေတက်တူးလတက်တူးFeather Tattooချယ်ရီပွင့်တက်တူးပန်းဦးရစ်သရဖူကိုတက်တူးလက်တက်တူးရာသီခွင်အရိပ်လက္ခဏာတက်တူးဂီတတက်တူးဂျီဩမေတြီ Tattoosmehndi ဒီဇိုင်းနှလုံး Tattoosစုံတွဲတက်တူးရေဘဝဲတက်တူးလူတို့သညျအဘို့အတက်တူးလူမျိုးစုတက်တူးရင်ဘတ်တက်တူးချစ်ခြင်းမေတ္တာတက်တူးrip တက်တူးမျက်စိတက်တူးလည်ပင်းတက်တူးပန်းပွင့်တက်တူး